Semalt Expert: Website Scraper sy ny dikany amin'ny tetikasa fanodinana data
Ny serivisy tranonkala programa izay mamoaka ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala samihafa araka ny torolalana nomenao. Tsy toy ny fitaovana maoderina tsotra sy nentim-paharazana , ny tranokala dia mikendry ny hamadika ny angon-drakitra tsy voaaro amin'ny tahiry voafantina, izay miorina sy mijery ao amin'ny tahiry fototra. Amin'ny fampiasana ity fitaovana ity dia mora ny manaisotra ireo angona avy amin'ny tranonkala samihafa - canadian dedicated server. Ny lalàna sasantsasany dia manatsara ny fiarovana ny fampahalalam-baovao tsy miankina amin'ny fampahalalam-baovao, ny vavahadin-tserasera, ary ny tambajotra sosialy. Ny fanasitranana tranonkala dia manaraka ireo fitsipika rehetra ary manome anao ny angon-drakitra momba ny zon'ny mpamorona ao anatin'ny segondra vitsy.
Ny anjara asan'ny tetikasa fandrindrana ny angon-drakitra:
Na mpandamina programa ianao, codec, manam-pahaizana, mpanao gazety, webmaster na mpandraharaha, data mba hanatsara ny fampisehoana ny tranonkalanao ary hampitombo ny asanao. Soa ihany fa afaka manamboatra tetikasa fanangonana antontan-drakitra sy fampanantenana hamoahana vaovao amin'ny endrika format malalaka toy ny CSV sy JSON.
Ny safidiny voalohany amin'ny orinasa sy ny orinasa
Mifototra amin'ny fangatahana avo lenta, ny orinasa sy ny orinasa isan-karazany dia misafidy tranokala ho an'ny asa mahomby sy marina. Ity fitaovana ity dia tsy vitan'ny hoe mamerina na mamoaka ny fampahalalam-baovao fa manitsy ny fahadisoana ara-pitsipi-pitenenana ihany koa. Midika izany fa ny angona azontsika dia tsy misy fahadisoana ary hatramin'ny marika. Manampy ny orinasa mandefa fampandrenesana amin'ny mpanjifany izy ireo, toy ny fiovan'ny vidin-javatra sy ny fivarotana. Ankoatra izany, ny tranon-tsakafo dia manampy ny orinasa hampitaha ny famaritana ny vokatra sy ny vidiny amin'ny mpifaninana aminy.
Fanaraha-maso ny fikorontanan'ny toetrandro amin'ny tranokala
Io no endrika malaza indrindra amin'ny tranokala. Manara-maso ny fiovaovan'ny toetr'andro izy ary manampy ireo mpikaroka meteorologists mifantoka amin'ny toetry ny klimaty amin'ny fomba tsara kokoa. Ity fitaovana ity dia mamoaka vaovao avy amin'ny fampahalalam-baovao isan-karazany sy tranonkala governemanta, ny fampiroboroboana ny tontolo iainana, ny fiovan'ny toetr'andro, ny fandotoana sy ny zavatra hafa mitovy.
Tsara ho an'ny tranokala e-commerce
Raha efa nametraka tranokala e-commerce ianao ary mikasa ny hanangona angona avy amin'ny toerana samihafa tahaka an'i Amazon sy eBay, tokony hiezaka ianao web scraper. Amin'ny alalan'ity fitaovana ity, dia afaka mahazo antoka ny fampahafantarana marina sy marina ianao, toy ny famaritana vokatra, fampahafantarana ny vidiny, lohateny sy ny sary. Manampy ireo mpizarazara dizitaly sy manam-pahaizana amin'ny media sosialy ihany koa ny mampiroborobo ny vokatra sy ny serivisy amin'ny fomba tsara kokoa. Amin'ny ankapobeny, ny fitaovan'ny tranonkala dia fitaovana iray mahomby sy mahasoa miaraka amin'ny sariohatra sy ny endri-javatra.
Mamerina tranonkala static sy dynamic
Ny iray amin'ireo toetra tena tsara indrindra sy tsara indrindra amin'ny tranokala dia dia io rindrambaiko io dia mamerina ireo pejy web dynamic sy static. Izy io koa dia manova ny votoatin'ny tranonkala ho amin'ny angon-drakitra ary mamela ny fanolorana ny sehatra fametrahana angona avo lenta. Noho izany, ny vahaolana amin'ny tranokala dia afaka mamaha ireo angon-drakitra sy vohikala mafonja ary manaisotra vaovao avy amin'izy ireo ao anatin'ny minitra vitsy.
fomba hafa enti-mampiditra. io sy Kimono Labs:
Import. io sy Kimono Labs dia fitaovana roa malaza amin'ny tranonkalan'ny Internet. Tonga amin'ny dikan-teny maimaim-poana sy karama izy ireo ary nanamora olona maro be hatreto. Azo antoka ny filazana fa ny Website Scraper dia fomba iray hafa mampiavaka ny entana. io sy Kimono Labs ary mikasa ny hanangona, hikaroka sy handinihana ireo antontan-kevitra mahasoa ho an'ireo mpampiasa azy. Noho izany, ity fitaovana ity dia tsara ho an'ny tetikasanao amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto.